Sebtember, 2010 cadastre, Microstation-Bentley
Inkasta oo juqraafiintu ay tahay nuqul dhaxaltooyo ah Bentley, ka dib markii Benley Map iyo Cadastre ay halkan joogaan, halkan waxaa ku qoran qoraallo arday oo doonaya in ay ku xirmaan xogta joqraafiyada mashruuca.
Post qaar ka hor ayaan sharaxay sida ka mid ah jaahwareerka juqraafi ee u shaqeynaya, soo koobitaankan ku dhowaad 15 ayaa muujinaya in aan runtii ku riyaaqay.
Ku xir khadadka
Ku xir mashruuc maxalli ah
Ka soo dhoofi faylasha qaabka
Abuuri koorso isku-xiran
Qaarkood kala duwanaanshaha oo leh Bentley Map
Kala duwanaanshaha Cadastre
U guuri Bentley Map
Ku dhuuqay G! Qalabka
Tusaalooyin reysasho leh
Maxaa dhacaya waa in Geographics had iyo jeer wuxuu ahaa sida software a ahaa in la ogaado wax sigaar cabbin heerka maamulka geeyo. Inkasta oo dadka isticmaala waa in ay bartaan in ay sameeyaan joogtada ee aasaasiga ah si ay u hirgeliyaan, weli waa aalad in inkastoo Bentley aanu ka jawaabin taageero weli difaacay pro isticmaala-baraha oo aan rabin in ay sii daayeen.
Juquraafiyadu waxay ku xiran yihiin ugu yaraan Oracle, SQLServer ama Access Nidaamyada Access, waxay doorbidi karaan ODBC, inkasta oo aysan ahayn saldhigyada keliya ama qaabka kaliya ee isku xirnaanta. Xidhiidhka ayaa la abuuray, sida aan ku sharxay qaybta 6 ee liiska hore.
Juquraafi ahaan, qaababkaas, waxay ka shaqeeyaan xiriirka shay-baarka (isku xirka xiriirka), kaas oo noqon kara xariiq, dhibic, unug ama qayb badan. Xiriirintani waxay u shaqaysaa sida soo socota:
Walxaha isku xiran waa inay ahaadaan khariidada, u maleynayaan lambarka tabka ee foomka 425876.
MsLink waa lambar aan lagu soo celin khariidada oo la xidhiidha marka shayga uu ku xiran yahay xogta macluumaadka.
MapID waa tiro ka mid ah in la wadaajiyo la map mslink diiwaangashan, sidaas mslink a soo celin karaa mid ka mid map in kale, farqiga u yahay in tirada map diiwaanka, ku xiran hoosaadka 12 sharaxay in liiska kor ku xusan.
Marka lala, waxaad ka arki kartaa Geographics loox kale ee database ah, sida diiwaanka canshuur, qiimaha hantida ... Oo sameeyo hawlaha kuwaas oo sida falanqaynta topological, khariidado mowduuc, qoritaan gaaban map, iwm
Si loola xiriiro mashruuca juquraafiyadeed, xogta xogta waa inay ku jirtaa jadwalka soo socda:
Intaa waxaa dheer, miiska aad rabto inaad isku xirto, sida diiwaanka musuqmaasuqa (u malaynayo in loo yaqaan ficha) waa inaad ku dartaa warqad la yiraahdo MsLink, sida aan u qoro, M iyo L ee kiiska sare. Taasina waa inay ahaato nooc ka madaxbannaan, sidaas darteed mar kasta oo faylka cusub la abuuro waxaa la siiyaa lambar aan la celin karin.
Xigashooyinka soo socda waa in sidoo kale lagu daraa miiska:
Goobta, magaca koorsooyinkani maaha mid muhiim ah, waxa xiiso leh waa in ay tahay tirooyin leh labo tobanlayaal. Tani waxay noqon doontaa inay awood u yeelato inay cusboonaysiiso aagga hantida ee xogta.
Xuddunta, sida mid hore, si loo kaydiyo qiimaha wadarta dhinacyada hantida.
x1, y1, x2, y2. Kuwani waa afar qaybood oo iskudhafyada qeexaya kala duwanaanta hantida la keydin doono, waxayna faa'iido u yeelan doonaan inay tagaan guriga (hel) la doortay, oo kaliya sida ku daabacan daabacaadda Geoweb.
Ka dib, xogta macluumaadka, miiska mscka waa lagama maarmaan in lagu daro jadwalka qaabka oo u qeexo aqoonsi. Tani si miiska loo arki karo Geographics ee tallaabada xigta oo waxaa laga diiwaan gelin karaa buugga.
Khariidada waa in la diiwaangeliyaa, tanina waa tan Mashruuc / dejin / diiwaangalin faylka / dgn faylka. Tani, khariidadu waxay ku qaadataa tiro tiro ah miiska jimicsiga.
Shaxda la abuuray waa in sidoo kale laga abuuraa joqraafiyada. Tani waa inaad tagtaa Mashruuc / mashruuc / jadwal / joornaalka miiska. Halkan loo abuuray by gelinayn tab ee MSLINK magaca (xuruufo) ee muhiimka ah ee aasaasiga ah iyo alias ah, ee FC kiiskan. ka dibna aamin. Taas awgeed, diyaar ayaan u nahay.
Shayga wuxuu ku xiran yahay barta miiska ficha, iyada oo loo marayo mslink oo ah furaha koowaad ee aasaasiga ah oo ku saleysan kulan la leh tiirarka key_chart.
Waa in ay noqdaan cayaar gaar ah oo u dhexeeya sheyga la xiri doono (u maleyn in lambarka kaarka ee khariidada) iyo aqoonsiga qaabka. Waxay noqon kartaa lambarka faylka ama lambarka cadastral, laakiin waa inaan lagu celin khariidadaas.
Si aad u xirto, a deedkaka dibna Maamulaha / maamulaha qoraalka. Waxaan ka tagnaa lambarka lambarka kaadhka oo kaliya, si aan u sii wadno xiriirka. Markaa waxaan doorannaa magaca miiska halkaas oo aan dooneyno inaan isku xirno iyo tiirarka ku jira ciyaarta. Xaaladdan oo kale, miiska miiska iyo tiirka key_chart.
Kala dooro ikhtiyaarka Isticmaal xayndaabka, waxaan dooran badhanka Ku biir waxaanan gujinaynaa shaashadda.
Diyaarso Gegraphics ayaa laga baaray dhamaanba goobaha nambarka khariidada ku yaal khariidada, oo ku xiran lambarka farta-xogta ee miiska ficha iyo tiir key_chart. Oo wuxuu sameeyey dhex-xidhka mslink madaxbannaanida hadda jirta Sida loo tijaabiyo waa iyada oo la adeegsanayo amarka dib-u-eegista sifooyinka, waa in kor loo qaado miiska la xiriira.
Si aad u cusboonaysiiso Goobta iyo wareega, heerarka ayaa ka tagay firfircoon ama muuqaalada ee dhulka iyo xuduudda tufaaxa, iyo centroids. Kadibna waa la sameeyaa Database / area perimeter u
Si loo casriyeeyo xiriiriyayaasha, Daabacaadda / isuduwidda cusbooneysiinta.
insert waa in la sameeyo diiwaanka cusub ee xogta, update si aad u sameyso cusbooneysi.
Waan ogahay, waan ogahay. Hadda waxaad fahamsan tahay sababta waxyaalahaani ay ula xiriiraan qalabka VBA ...
Si kastaba ha ahaatee, barashada macquulnimadu waxay ahayd layli maskaxeed oo horumariyay qaybo ka mid ah maskaxda. The Maamulaha Geospatial Waxay kaloo leedahay guriyaal.
Post Previous«Previous La hadlida dadka reer Tuent
Post Next Farmville, ugu fiican ee ciyaaraha onlineNext »